ဖောင်ဒေးရှင်းကဆုချ | မတ်ေတာ, လိင်နှင့်အင်တာနက် | porn ဖြတ်
Reward ဖောင်ဒေးရှင်းသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်လိင်ပညာရေးအတွက်ရှေ့ဆောင်ဆက်ဆံရေးဖြစ်သည်။ ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်စနစ်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်လိင်ကို ဦး တည်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးပမ်းမှုအပြင်အစားအစာ၊ အသစ်အဆန်းနှင့်ရရှိမှုကဲ့သို့သောအခြားသဘာဝအကျိုးကျေးဇူးများအတွက်တာ ၀ န်ရှိသည်ဟူသောအချက်မှလာသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ အရက်၊ နီကိုတင်းနှင့်အင်တာနက်တို့ကဲ့သို့သောထူးကဲသောဆုများကြောင့်ဆုလာဘ်စနစ်ကိုပြန်ပေးဆွဲနိုင်သည်။
Reward ဖောင်ဒေးရှင်းသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပတ်သက်သောသက်သေအထောက်အထားများကိုအခြေခံသည့်သတင်းအရင်းအမြစ်ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ကာယကျန်းမာရေး၊ ဆက်ဆံရေး၊
တော်ဝင်ကောလိပ်၏အထွေထွေရောဂါကုဆရာ ၀ န်ကောလိပ်သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အခြားကျွမ်းကျင်သူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့ကျင့်ရေးအလုပ်ရုံကိုအသိအမှတ်ပြုထားသည် စိတ်ကျန်းမာရေး နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုများအပါအ ၀ င် ဒါကိုထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ငါတို့ကအချစ်၊ လိင်နဲ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအကြောင်းသုတေသနတွေကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အများပြည်သူတွေလက်လှမ်းမီအောင်လုပ်တယ်။ ငါတို့အခမဲ့ကြည့်ပါ သင်ခန်းစာအစီအစဉ်များ ယခုကျောင်းများအတွက်ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်ဤနှစ်ခုစလုံးတွင်ရနိုင်သည် Times Educational Supplement ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ လည်းအခမဲ့ဖြစ်သည်။ ငါတို့ကိုလည်းကြည့်ပါ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအတွက် မိဘများလမ်းညွှန်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှု၏အခန်းကဏ္gingကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းမရှိဘဲယနေ့အချစ်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအကြောင်းပြောဆိုရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်ရှိသည်။ အထူးသဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များကြားမျှော်လင့်ချက်နှင့်အပြုအမူအပေါ်လွှမ်းမိုးသည်။
သုတေသန ဗြိတိန်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့မှတွေ့ရှိချက်အရယူကေတွင်တစ်လလျှင်ကလေး ၁.၄ သန်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုကြသည်။ ကလေး ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှုကိုပထမဆုံးအကြိမ်မြင်တွေ့ခဲ့သည့်အသက် ၁၄ နှစ်သို့မဟုတ် ၄ နှစ်နှင့်ငယ်သည်။ ၆၂ ရာခိုင်နှုန်းသောအများစုကမူသူတို့ကမတော်တဆထိမိလဲသွားပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုကြည့်မည်ဟုမျှော်လင့်မထားကြကြောင်းပြောကြားခဲ့သည် ၈၃ ရာခိုင်နှုန်းသောမိဘအများစုသည်ဤအန္တရာယ်ရှိသောဆိုက်များအတွက်အသက်စစ်ဆေးခြင်းကိုကြည့်ချင်ကြသည်။ အသက် ၁၁ နှစ်မှ ၁၃ နှစ်ကြားရှိ ၅၆ ရာခိုင်နှုန်းသည်အွန်လိုင်းမှ '၁၈ နှစ်အထက်' အကြောင်းအရာမှကာကွယ်လိုကြသည်။
က short ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
ငါတို့သည်ဤ2မိနစ်အကြံပြု ကာတွန်း တစ် ဦး primer အဖြစ်။ ဦး နှောက်အပေါ်ညစ်ညမ်းမှုရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကောင်းကောင်းရှင်းပြဖို့ဒီကိုကြည့်ပါ5မိနစ်ကောက်နုတ်ချက် တီဗီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်မှ။ ၎င်းတွင် ဦး နှောက်နှင့်ဆိုင်သောခွဲစိတ်ဆရာ ၀ န်၊ ကိန်းဘရစ်တက္ကသိုလ်မှသုတေသနနှင့်လူငယ်သုံးစွဲသူများ၏အတွေ့အကြုံများပါရှိသည်။
ဒီနေရာမှာရိုးရှင်းပါတယ် မိမိကိုယ်ကိုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း porn သင်သို့မဟုတ်သင်နှင့်နီးစပ်သူတစ်ဦးဦးကိုထိခိုက်စေပါကကြည့်ဖို့အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် Clinician ကဒီဇိုင်းလေ့ကျင့်ခန်း။
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်အတိတ်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်မတူပါ။ ၎င်းသည် 'သဘာဝလွန်' လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အရက်သောက်သောအခါ ဦး နှောက်ကိုကိုကင်း၊ ဘိန်းဖြူနှင့်အလားတူစွာထိခိုက်နိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဆိုဒ်များတွင်အသုံးပြုသူ ၂၀-၃၀% ခန့်ရှိသောကလေးများအတွက်အထူးသဖြင့်မသင့်တော်ပါ။ ဤအချက်သည် UK အစိုးရ၏အသက်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကိုကလေးသူငယ်များလက်လှမ်းမီမှုကိုကန့်သတ်ရန်နှင့်သူတို့၏ကျန်းမာရေးကိုကာကွယ်ရန်အတွက်တရားမျှတစေသည်။
အသက် ၇ နှစ်အောက်ကလေးငယ်များသည်ထိရောက်သောအသက်စစ်ဆေးမှုမရှိသောကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုခံစားနေရသည် သုတေသနလုပ်ငန်း ဗြိတိသျှရုပ်ရှင်ကားအမျိုးအစားခွဲခြားရေးဘုတ်အဖွဲ့မှပြန်တမ်း။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်အမြတ်အစွန်းအတွက်ပြုလုပ်ထားပြီးဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာသောစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကလေးများအားလိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းသင်ကြားရန်မပြုလုပ်ပါ။
ယခင်ကအလွန်များပြားလှသောလိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုယခုအချိန်တွင်အလွန်လွတ်လပ်စွာရရှိနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ၎င်းသည်လူသားတို့၏သမိုင်းတွင်အကြီးမားဆုံး၊ မထိန်းချုပ်ထားသောလူမှုရေးစမ်းသပ်မှုဖြစ်သည်။ အတိတ်ကာလ၌အမာခံညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုရန်ခက်ခဲခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်လိုင်စင်ရအရွယ်ရောက်ပြီးသောဆိုင်များမှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အသက် ၁၈ နှစ်အောက်မည်သူမဆို ၀ င်ရောက်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထားသည်။ ယနေ့တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအများစုကိုစမတ်ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များမှအခမဲ့ရယူနိုင်သည်။ visitors ည့်သည်များအတွက်ထိရောက်သောအသက်စစ်ဆေးမှုပျောက်ဆုံးနေသည်။ အလွန်အကျွံသုံးတာကထုတ်လုပ်တာပါ ကျယ်ပြန့် of စိတ်ကျန်းမာရေး နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်စွဲလမ်းမှုစသည့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြissuesနာများဖြစ်သည်။ ဒါကအသက်အရွယ်အုပ်စုအားလုံးမှာဖြစ်ပျက်နေတယ်။
သုတေသနပြုချက်အရအင်တာနက်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းကဘဝ၏လိင်မှုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သောစိတ် ၀ င်စားမှုနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ ငယ်ရွယ်သောလူလတ်ပိုင်းအရွယ်လူကြီးများတိုးများလာခြင်းသည်၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ လူငယ်များသည်လည်းသူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၌ ပိုမို၍ ပြင်းထန်သောအကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်လာသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာလူကြီးများနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများအားသူတို့၏လူနာများ၊ ဖောက်သည်များနှင့်ကိုယ်ပိုင်ကလေးများကိုကူညီရန်သင့်တော်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ရန်လုံလောက်သောယုံကြည်မှုရှိရန်လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများကိုရယူနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ယာယီ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်ကြိမ်နှုန်းကိုလျှော့ချခြင်းသည်စွဲလမ်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများမှပြန်လည်နာလန်ထူရန်ဖြစ်သည်။
'စက်မှုအစွမ်းသတ္တိ' အင်တာနက် Porn
လိင်မှုကိစ္စ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေ၊ အပြုအမူ၊ ဆက်ဆံရေး၊ အောင်မြင်မှု၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့်ပြစ်မှုအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ အသုံးပြုသူသည်အရက်အလွန်အကျွံသောက်နေသရွေ့ ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများသည်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာအမြစ်တွယ်လာပြီးပြန်လည်ပြောင်းရန်ခက်ခဲသည်။ ရံဖန်ရံခါအသုံးပြုခြင်းသည်ကြာရှည်ခံသောအန္တရာယ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ဖွယ်မရှိချေ။ အလုပ်လုပ်တဲ့ ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများကိုအယောင်ဆောင်ပါပြီ မှတျတမျးတငျထား တစ်ပတ်လျှင် ၃ နာရီခန့်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်အလွန်အကျွံနှိုးဆွမှုများစွာကိုကိုင်တွယ်ရန်အဆင်မပြေသေးပါ။ အထူးသဖြင့်ကလေးသူငယ်များသည်အကန့်အသတ်မဲ့သောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအကန့်အသတ်မရှိထောက်ပံ့ပေးနေသည်။ ၎င်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်သင်ယူမှု၏အဓိကအဆင့်တွင်သူတို့၏အထိခိုက်မခံသော ဦး နှောက်အပေါ်ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။
ယနေ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအများစုသည်ရင့်ကျက်မှုနှင့်ယုံကြည်မှုကိုစံနမူနာမပြဘဲအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများနှင့်တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများအပေါ်မလုံခြုံသောလိင်၊ ကလေးများသည်သူတို့၏ ဦး နှောက်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်အမှန်တကယ်ဘဝမိတ်ဖက်များနှင့်မကိုက်ညီသောမြင့်တက်သောနှိုးဆွမှုလိုအပ်သည်ကိုပရိုဂရမ်ရေးဆွဲနေသည်။ ၎င်းကိုသူတို့အားလုံး voyeurs ဖြစ်ရန်လေ့ကျင့်ပေးသည်။
တချိန်တည်းမှာပင်များစွာသောသူတို့သည်လိင်ဆိုင်ရာမလုံလောက်မှုကိုခံစားနေကြရပြီးရေရှည်အတွက်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောရင်းနှီးချစ်ခင်သောဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သောလူ့အသွင်အရကျွမ်းကျင်မှုများကိုသင်ယူရန်ပျက်ကွက်နေကြသည်။ ၎င်းသည်အထီးကျန်မှု၊ လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာကိုတိုးပွားစေသည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုကြည့်သည့်လူငယ်အများစု၏မတော်တဆဖြစ်မှုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းကိုမရည်ရွယ်ဟုဆိုသောကလေးများ ၁၁-၁၃ မှ ၆၀% ကျော်သည်မတော်တဆဖြစ်ခဲ့သည်။ သုတေသနလုပ်ငန်း။ ကလေးများသည်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနှင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုခံစားခဲ့ရသည်။ အထူးသဖြင့်အသက် ၁၀ နှစ်အောက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
၎င်းသည်မိဘများစွာအတွက်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်နိုင်သည်။ သင်ပိုမိုလေ့လာလိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြည့်ပါ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေများကိုမိဘများလမ်းညွှန် ။ သင်၏ကလေးများနှင့်စကားစမြည်ပြောဆိုသူများအတွက်မိဘများနှင့်စောင့်ရှောက်သူများအားကူညီရန်နှင့်လိုအပ်လျှင်ကျောင်းများနှင့်အထောက်အပံ့ကိုညှိနှိုင်းရန်ရည်ရွယ်သည်။ Kent ရဲတပ်ဖွဲ့ ဖုန်းကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဆိုပါကမိဘများသည် ၄ ​​င်းတို့၏ကလေးများအား 'sexting' အတွက်တရားစွဲဆိုခံရနိုင်သည်ကိုသတိပေးရန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စာမျက်နှာအကြောင်းကိုကြည့်ပါ sexting နှင့်စကော့တလန်အတွက်ဥပဒေ ထိုအခါအတွက် sexting သည် အင်္ဂလန်, ဝေလနယ်နှင့်မြောက်အိုင်ယာလန်.
ကျွန်ုပ်တို့သည် အခမဲ့စီးရီးများကို စတင်လိုက်ပါပြီ။ သင်ခန်းစာအစီအစဉ်များ “ Sexting ကိုမိတ်ဆက်ခြင်း” နှင့်ပတ်သက်သောဆရာများအတွက်၊ "Sexting နှင့်ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်"; "Sexting, ပညတ္တိကျမ်းနှင့်သင်"; “ စမ်းသပ်မှုအပေါ်အပြာစာပေ၊ “ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ လိင်နှင့်အပြာစာပေများ”; “ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေး” နှင့်“ Great Porn Experiment” ။ ၎င်းတို့တွင်ကြွယ်ဝသော၊ ပျော်စရာကောင်းသော၊ အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသည့်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ကျောင်းသားများသည်အရေးကြီးသောကိစ္စရပ်များအားလုံးကိုဆွေးနွေးရန်အတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသောနေရာတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ လူတွေကအသိပေးရွေးချယ်မှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။
လက်ရှိသင်ခန်းစာများသည်ယုံကြည်ခြင်းကိုအခြေခံသည့်ကျောင်းများအတွက်လည်းသင့်လျော်ပါသည်။ အပြာစာပေရုပ်ပုံမပြရ။ ဘာသာရေးအယူဝါဒနှင့်ဆန့်ကျင်သောမည်သည့်ဘာသာစကားကိုမဆိုပြုပြင်နိုင်သည်။
Reward ဖောင်ဒေးရှင်းမှသုတေသနအသစ်များကိုနေ့စဉ်စောင့်ကြည့်လေ့လာပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များတွင်တိုးတက်မှုများကိုထည့်သွင်းထားသည်။ အထူးသဖြင့်ငါတို့ကိုယ်ပိုင်သုတေသနလုပ်တယ် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း အခြားသူများကတိုးတက်မှုအသစ်များနှင့်အတူနောက်ဆုံးပေါ် - နောက်ဆုံးပေါ်နေဖို့နိုင်အောင်နောက်ဆုံးပေါ်သုတေသန၏။
ယခုရှိပါတယ် လေ့လာမှုခုနစ်ခု တစ်ဦးကိုသရုပ်ပြ porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပျက်ဆီးအကြားကြောင်းကျိုးဆက်စပ် link ကို ကြောင်းအသုံးပြုမှုအနေဖြင့်ပေါ်ထွက်လာသော။
အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှမှာကျနော်တို့သတင်းပို့ ပုံပြင်များ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံကိုပြproblemနာဖြစ်စေသောတီထွင်ခဲ့ကြသည့်ထောင်နှင့်ချီသောအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများမှဖြစ်သည်။ ဤတရား ၀ င်မဟုတ်သောသုတေသနသည်လက်ရှိခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအတွက်တန်ဖိုးရှိသည်။ များစွာသောသူတို့သည်ညစ်ညမ်းမှုကိုဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ပြီးရလဒ်အနေဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများစွာခံစားခဲ့ရသည်။ ကြည့်ပါ ထိုလုလင်'' s ကိုပုံပြင်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကုမ္ပဏီများသည်အင်တာနက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဒီဇိုင်းတွင်ရှေ့တန်းမှပါဝင်သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကအမြဲတမ်းအလွန်အမင်းခန့်မှန်းခြင်းက ဦး နှောက်ကိုပိုမိုပြင်းထန်သောစွဲလမ်းမှုဖြစ်စေသည်။ ဤဆွဲဆောင်မှုများသည်ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူ၏အတွေးများနှင့်အပြုအမူများကိုအချိန်နှင့်အမျှလွှမ်းမိုးနိုင်သည်။ သုံးစွဲသူများတိုးပွားလာသောကြောင့်၎င်းသည် ဦး တည်နိုင်သည် အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရောဂါများဆိုင်ရာအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (ICD-11) ၏ ၁၁ ကြိမ်မြောက်တည်းဖြတ်ခြင်းဖြင့်မကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သောဤရောဂါတွင်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများပါဝင်သည်။ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုထိန်းချုပ်ခြင်းမရှိသည့်အပြင် ICD-11 ကို အသုံးပြု၍ မဟုတ်သောစွဲလမ်းစေသောရောဂါဟုခွဲခြားနိုင်သည်။
ထိုအဆိုအရ နောက်ဆုံးပေါ်သုတေသနလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ဆေးကုသမှုခံယူလိုသူ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည်ညစ်ညမ်းသောပြproblemနာရှိသည်ဟုအစီရင်ခံကြသည်။ ဒီအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ Watch TEDx ဟောပြောပွဲ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်မှလေ့ကျင့်ထားသော neuroscientist Casper Schmidt မှ (၉ မိနစ်)“ compulsive လိင်အပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါ” အကြောင်းလေ့လာရန်။
ယနေ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည်လွန်ခဲ့သည့် ၁၀ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်ကပင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရရှိနိုင်သောအရေအတွက်နှင့်လှုံ့ဆော်မှုအဆင့်အရစက်မှုလုပ်ငန်းအစွမ်းသတ္တိဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရွယ်ရောက်သူများအတွက်တရားဝင်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုပိတ်ပင်ရန်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ကလေးများကိုကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်လှုံ့ဆော်ပေးသည့်အလွန်အကျွံတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အချို့သူများအတွက်စိတ်ပိုင်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြleadနာများဖြစ်စေနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်လက်ရှိရရှိနိုင်သည့်သုတေသနမှအကောင်းဆုံးသက်သေအထောက်အထားများနှင့်လိုအပ်ပါကအချက်ပြပြန်လည်ထူထောင်ရေးရွေးချယ်မှုများအပေါ် အခြေခံ၍ 'အသိပေး' ထားသောရွေးချယ်မှုပြုလုပ်နိုင်ရန်ကူညီပေးလိုသည်။ ယာယီ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းကို ဖယ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် အကြိမ်ရေလျှော့ချခြင်းသည် စွဲလမ်းခြင်း သို့မဟုတ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်ခြင်းမှ အမာခံပစ္စည်းနှင့် ညစ်ညမ်းဖြစ်စေသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအထိ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည် - အခြားဘာမျှမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်တာနက်မှညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်ကလေးများလွယ်ကူစွာသွားလာရေးကိုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်သည်။ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာ သုတေသနလုပ်ငန်း စာတမ်းများအရ၎င်းသည် ဦး နှောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားနည်းသောအဆင့်တွင်ကလေးများအားထိခိုက်စေသည်ဟုဖော်ပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများသို့တက်ရောက်ခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်အထိကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများ၏အဆိုအရလွန်ခဲ့သော ၈ နှစ်အတွင်းကလေးနှင့်ကလေးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုသိသိသာသာမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာဒဏ်ရာများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ သေဆုံးမှု။ ၎င်းသည်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုနှင့်ဆက်နွယ်သည်။ အဓိကအားဖြင့်အမျိုးသမီးများအားယောက်ျားများကကျူးလွန်သည်။
စီးပွားဖြစ် ညစ်ညမ်းဆိုက်များနှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုဒ်များအတွက် ထိရောက်သော အသက်အရွယ်စိစစ်မှုကို တွန်းအားပေးရန် ယူကေအစိုးရ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ထောက်ခံပါသည်။ အန္တရာယ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပညာရေးလိုအပ်ချက်ကို အစားထိုးမည်မဟုတ်ပါ။ ငါတို့ ဘာမှမလုပ်ရင် ဘယ်သူက အကျိုးရှိမှာလဲ။ ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာတန်တဲ့ ညစ်ညမ်းလုပ်ငန်း။ ယူကေအစိုးရသည် ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့် ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များမှတစ်ဆင့် ရရှိနိုင်သော ညစ်ညမ်းများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် စီစဉ်နေသည်။ အွန်လိုင်းလုံခြုံရေးဘီလ်. သို့သော် ၎င်းသည် 2023 နှစ်ကုန် သို့မဟုတ် 2024 အစောပိုင်းအထိ ဥပဒေဖြစ်နိုင်ဖွယ်မရှိပါ။
ဤဝဘ်ဆိုက်ရှိ အချက်အလက်များသည် လူများကို အောင်မြင်ပြီး ချစ်ဖွယ်လိင်ဆက်ဆံမှုတွင် ပျော်မွေ့ရန် ၎င်းတို့၏အခွင့်အရေးများကို မြှင့်တင်ရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ဆက်စပ်အကြောင်းအရာများ ထပ်ဖြည့်လိုပါက info@rewardfoundation.org တွင် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် သိရှိနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှမ ကုထုံးပူဇော်မဟုတ်သလိုဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုမပေး။ သို့သော်အသုံးပြုမှုပြproblemနာများဖြစ်လာသောလူများအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလမ်းကြောင်းသို့နိမိတ်လက္ခဏာများပြသသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာလူကြီးများနှင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည်အထောက်အထားနှင့်အထောက်အပံ့ကို၎င်းတို့ဆီသို့သင့်လျော်သောအရေးယူမှုပြုလုပ်နိုင်ရန်ကူညီရန်ဖြစ်သည်။